‘सोच र विचारलाई पनि लगानी गर्न बुटक्याम्पले सघाउँछ’ सचिन डाँगी
नयाँ आविस्कार, सोच तथा विचारलाई कसरी बिजनेसमा लगाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य सहित विश्वभर विभिन्न विषयमा बुटक्याम्प अयोजना हुँदै आएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा पनि विभिन्न क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले विभिन्न विषयमा यस्तै प्रकृतिका बुटक्याम्पहरु गर्दै आएको देखिन्छ । यस्तो बुटक्याम्प किन आवस्यक छ ? बुटक्याम्पमा सहभागीहरुले कस्तो फाइदा लिन सक्छन? कस्ता विषयमा बुटक्याम्प आयोजना गरिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले टिनएज सोसाइटी अफ नेपालका संयोजक सचिन डाँगीसँग गरेको कुराकानी ।
बुटक्याम्प के हो ? यसमा कस्ता विषयहरु समावेस गरिएको हुन्छ ?
नयाँ सोच तथा आविस्कारहरुलाई कसरी बिजनेसमा लगाउन सकिन्छ भनेर बुटक्याम्प मार्फत आफ्ना बिचार तथा अनुभवहरु आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै हामीले गर्ने बुटक्याम्प खासगरी लगानी र अर्थशास्त्र सम्बन्धि केन्द्रित रहने छ । बुटक्याम्पमा सहभागीहरुलाई हामीले खासगरी नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था, नेपालमा लगानीका क्षेत्रहरुका विषयमा जानकारी दिदैं आएका छौं । आफुसँग भएको पैसालाई कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने र कसरी फाइदा लिने भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदछौं । त्यसबाहेक आफुसँग भएको सोच र सिपलाई कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो बुटक्याम्प केन्द्रीत हुँदै आएको छ । यस्तै विषयमा छलफल तथा विमर्श गर्न २ दिन सम्म गरिने कार्यक्रम बुटक्याम्प हो । जहाँ क्याम्प बनाएर सहभागीहरु दुई दिन सम्म सँगै बस्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईंहरुलाई बुटक्याम्प गर्ने सोच कसरी आयो ?
एक वर्ष अघि म न्क्क् क्गmmष्त मा भाग लिन अमेरिका गएको थिएँ । एक साताको कार्यक्रम रहेको थियो । त्यहाँ विभिन्न कम्पनीका मालिक तथा कार्यकारीहरुपनि सहभागी थिए । उक्त कार्यक्रममा विभिन्न कम्पनीमा भएका समस्याको समाधानका उपायका विषयमा खुला छलफल भएको थियो । विभिन्न व्यक्तिहरुले आफ्ना बिचारहरु दिनु भायो । बिचार हुनेहरुले लगानीकर्ता भेटन पाए भने समस्या हुनेहरुले समाधान गर्नसक्ने दक्ष मानिससँग सल्लाह लिन पाए । त्यहिंबाट नै मैले नेपालमा पनि बुटक्याम्प गर्न जरुरी छ भनेर केही साथिहरु मिलेर बुटक्याम्पको आयोजना गर्दै आएका छौं ।
नेपालमा बुटक्याम्प सम्भव छ ?
सम्भव छ । हामीले अहिले १ वटा बुटक्याम्प मकवानपुरको चित्लाङमा सम्पन्न गरिसकेका छौं । अव यसै महिना पोखरामा बुटक्याम्प गर्न लागिरहेका छौं । बुटक्याम्पमा सहभागी जो कोहीले २ दिन सम्म एउटै विषयमा छलफल हुने भएकाले धेरै कुरा सिक्न सक्नेछन् । त्यस्तै हामीसँग रहेका स्रोतहरुको परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत जानकारी पाउन सकिने भएकाले यो अत्यन्तै फलदायी हुने छ ।
बुटक्याम्प खासगरी कसका लागि हो ? कसकसले यसमा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् ?
यो बुटक्याम्पमा सबै तहका मानिसहरुले सहभागिता जनाउन सक्ने छन् । तर हामीले गर्ने क्याम्पमा खासगरी ब्याचलर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु सहभागी भएको पाएका छौं । यो कार्यक्रममा आफुसँग १ सय रुपैयाँ छ भने त्यसको लगानी कुन क्षेत्रमा गर्दा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रीत हुने भएकाले जो कोहीले पनि सहभागिता जनाउन सक्ने छन् । त्यस्तै हामीले पैसा मात्र लगानीको स्रोत होइन तपाईसँग भएको सोच तथा विचारलाई पनि लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाउने भएकाले बुटक्याम्पमा आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ ।
तपाइहरुले अब गर्न लागेको बुटक्याम्ममा कस्ता कार्यक्रमहरु समावेस गर्दै हुनुहुन्छ ?
सुरुमा परिचयात्मक कार्यक्रम हुने छ, तयसलाई हामी ष्अभ दचभबपभच कभककष्यल भन्छौं। त्यसपछि अर्थशास्त्रका केहि विषयहरुमा जानकारी गराइने छ । लगानीका क्षेत्रका विषयमा पनि जानकारी गराउने छौं । नेपालमा पछिल्लो समय शेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ । त्यो विषयमा पनि लगानी गर्न तरिका, कम्पनीको छनोट, विभिन्न समाचारको प्रभाव कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा छलफल तथा प्रस्तुति हुने छ ।
यसअघि पनि एक वटा बुटक्याम्प गर्नुभयो । त्यो र अहिलेकोमा के फरक छ ?
पहिला हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कुल ४० जना जति सहभागी रहेका थियौं । त्यो पनि यहि विषयमा भएको थियो । त्यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव लिनु भएका व्यक्तित्वहरुबाट अनुभवहरु आदान प्रदान गर्ने काम भएको थियो । अहिले त्यो भन्दा पनि बृहत रुपमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं । कार्यक्रलाई आकर्षक बनाउन विाभिन्न मनोरन्जनका कार्यक्रम पनि राखेका छौं ।
'‘सोच र विचारलाई पनि लगानी गर्न बुटक्याम्पले सघाउँछ’ सचिन डाँगी '
'‘बैंकहरुले सित्तैमा बीमा गर्दैनन्, यो भ्रामक प्रचार हो’ बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईंसँगको अन्तरवार्ता'